IApartment entle yaBucala eneOcean View
UMichael ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Konwabele ukuhlala kwakho esixekweni kule ndlu inomtsalane kunye neyangoku inegumbi elinye lokulala kumgangatho we-4. Ikwindawo esembindini weZona Universitaria kufutshane nombindi wedolophu eneendawo zokutyela ezahlukeneyo, iibhanki kunye neevenkile ezinkulu kunye nemizuzu embalwa yokuhamba ukusuka kwindlela yokuhamba. Kananjalo malunga nemizuzu eli-15 ngemoto ukusuka kwiKliniki ye-CIPLA, i-CECIP kunye nezinye iiklinikhi ezaziwayo.
Eli gumbi linomtsalane liyakwenza ukuba ufune ukuhlala. Ilungiselelwe ikakhulu iindwendwe, nokuba ufuna igumbi lokutyela okanye indawo yokusebenza yelaptop yakho, ilungele zombini. Eli fulethi likwanekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elibonelela ngesitovu, ifriji, ioveni, umenzi wekofu, iimbiza, iipani, iikomityi, iipleyiti kunye nempahla yasekhitshini ezityiwa endlini. Uya kuba newasha kunye nesomisi ekhoyo ngexesha lokuhlala kwakho. Zininzi iindlela zokuzonwabisa ezikufutshane ezinje ngeendawo zokuthenga, i-bowling, iindawo zokutyela, iicinema kunye neepaki. Nangona kunjalo, ikwindawo esembindini ifanelekile ukwenza imisebenzi okanye ukonwabisa. Uya kuqaphela ukuba ukwindawo entle kakhulu. Le ndlu icocekile kwaye icocekile inemilinganiselo yoKhuseleko lwe-COVID-19.
I-AIR CONDITIONING EKUVELA KWIGUMBI LOKUHLALA CIMIWE.
4.73 · Izimvo eziyi-128
Ummelwane uhlala kwisakhiwo esiphakathi kweso sixeko amanyathelo ambalwa ukusuka kwiindawo ezibaluleke kakhulu zokutyelela kunye nesidingo esikhulu eSanto Domingo. Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo.
Hola, soy Michael Suero me considero una persona responsable, dinámica y creativa, siempre estoy a la mayor disposición de servirles a nuestros clientes para que se sientan como en casa y disfruten de una estadía placentera. Durante tu estadía en su mayoría, estamos disponibles todo el tiempo a través de la mensajería de Airbnb. Entendemos lo importante que es estar ahí para usted.
Hola, soy Michael Suero me considero una persona responsable, dinámica y creativa, siempre estoy a la mayor disposición de servirles a nuestros clientes para que se sientan como en…
Ingqalelo yobuqu kunye neendwendwe apho ziya kwamkelwa khona ukubanika uqhelaniso lwendawo abalufunayo ukwenza ukuhlala kwabo kube ngamava amnandi, kunye nokufumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1593